Oniversiten'ny fampihorohoroana? | Hevitra MPANOHARIANA
Taloha dia nahita afisy mihintsy izahay teny amin'ireny trano ireny hoe tsy natao afatsy ho an'ny sud-est. Ilay olona sud est anefa mbola tsy omena maimaim-poana zo hipetraka ao akory.
1° efa tsy ny coum intsony izany no mifantina ny mpianatra ahazo trano ?
2° tsy nisy lalàna ofisialy nanisy quota teny amin'ireny trano hipetrahan'ny mpianatra ireny
3° niniana nopotehina ny restau U mba nangalàna tsimoramora ny varotra sakafo manta ho an'ny mpianatra
4° aiza moa izao ireny olona nanao tsindy hazo lena tena amin'ny Cur ireny ankehitriny ?
Nampidirin'i potsy @ 11:08, 2008-02-01 [Valio]
misy fanadiovana tokony atao mihitsy eny ankatso e! maro ny mpianatra angatra (fantome) eny izay efa ela no nahavita ny azy kanefa tsy mety hiala eny raha tsy sorohana @ lapela angamba dia izao lasa mitovy @ alkaida izao no niafarany
Nampidirin'i news2dago @ 13:13, 2008-02-01 [Valio]
Marina mihitsy ity resakareo ity ry Ra-Jentilisa.
Tsaroako tsara izahay tamin' ny dimiambinifolo taona lasa, fony nitady trano nisitrihana teny amin' ny cité universitaire Ankatso 2 dia voatery "nividy" (izany hoe nandoa vola be) tamin' ny mpianatra hafa izay nipetraka taloha tao amin' ny bloc (=ilay efitrano) mba nahafahana nipetraka tao.
Nony efa nipetraka tao anefa dia hita fa ireo voisins dia olona efa tsy nianatra intsony fa nanao bizna tamin' ny fakana ration (vary sy laoka manta ary mofo dipaina) tao amin' ny restau universitaire isan'andro.
Ny "tena mpianatra" (vrais étudiants) moa dia tsy mba afaka nandany andro nilahatra vary sy laoka-manta sy mofo isan'andro satria tsy maintsy mamonjy cours. Noho izany dia nandeha tsara ny bizna an'ireo faux-étudiants.
** (Nefa tamin' izany ny efitra anakiray dia nozaraina telo, sady tery kely no namofona, sady tsy ifandrenesana amin' ny feon-jazakely mitomany sy ny biby fiompy [akoho, gana] sy zavatra isankarazany hafa koa. Ny douche sy ny kabone moa dia nilaharana)
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 14:39, 2008-02-01 [Valio]
Hono ho'aho, mba toy izany ve ny anjerimanontolo any Toamasina, ary ny mponina avy eo amin'ny faritanin'i Toamasina ve tsy manana zo hahazo trano amin'ny cité any Toamasina ihany koa?
Nampidirin'i DotMG @ 06:18, 2008-02-02 [Valio]
Ny amin'ny fanontanian'i DotMG aloha dia tsy haiko valiana satria tsy manana loharanombaovao ahafahana mahafantatra ny misasika izay aho.
Nampidirin'i jentilisa @ 10:58, 2008-02-02 [Valio]
Misy fihetsika toy ireo voalaza dia tsy azo ekena na dia tsy voasoratra mazava ao anaty lalAna aza. Tsy azo ekena ary indrindra tokony ho saziana mafy ho entina atao fampianarana ho an'ny ao aoriana.
Io fampianarana ho fitsinjovana ny ho avy io no tsy ao anaty sain'ny ireo milaza ho "intellectuels" malagasy. Mijanona ao aminy zava-madinika miseho ankehitriny ny akabeazany fa tsy mandalina ny antony marina naha tonga ny firenena ao anatiny faran'izay mahantra : ny antony lehibe dia ny fanadinoina ny asa ratsy natao taminy firenena ary indrindra ny fanaingana ireo nanao izany ho anisan'ny olo-mangan'ny firenena.
Ohatra vitsy tadiky kely : nodorana ny hôtel de villen'Antananarivo, ny lapan'Andafiavaratra, Manjakamiadana; nentina natao sorona teny Iavoloha ny vahoaka; nampijaliana ara-nofo izay rehetra nanerana ny firenena nanaraka ny safidimbahoaka taminy 2002.
Raha hitsara sy manameloka ny tompon'andraikitra tamin'izany dia ho voapangan'ny "mpitana ny demokrasia" fa tsy manaja ny zon'olombelona. Toy izany koa raha manda ny dikitatin'ny "mpianatra amin'anarana fotsiny" eny aminy Oniversity izay tsy maintsy efa niaina sy mahazo vahana aminy fanohanana ara-politika.
Tsy mahagaga raha toa ka tsy manome fanampiana ho any Oniversity gasy intsony ny mpamatsy vola (BM) efa taminy farany 19990. Politika sy bizina no fibahanany vitsy ao anatin'ny zon'ny lianampianarana eny.
Vahaolana : manangana Oniversity pilote elitiste sy tsy miankina ho any mpianatra liampahalalana. Ny zanakiny tsy ampy fivelomana hahazo fanampiana. Ny vola miodina ao manampy ny an'ny R & R manana ny ampy tsara dia avy any aminy orin'asa tsy miakina sy tsangan'olona philantropes na malagasy na vahiny . Izany no maha tena Oniversity ny any firenena mandroso. Ny tanjona dia ny famoahana tanora mitodika sy miomana any aminy ho avin'ny firenena.
Nampidirin'i Kitana @ 15:00, 2008-02-02 [Valio]
Efa noteneniko ihany ity fa averiko hoe tokony ovaina tsikelikely ho andoavam-bola ny fianarana eny @ universite.
Ovaina koa ny systeme an'ny bourse sy ny trano... ny mpianatra mintsy no tokony tsy hisaina hoe manana zo hanao dihi-doha izy... izy aza nge fanampiana hoazy no atao @ ireny e...
Nampidirin'i simp @ 15:22, 2008-02-03 [Valio]
Izay mihitsy no tena olana. Be loatra ny mpianatra tsy te ahalala ny hoe tsy maintsy sivanina na tiany na tsy tiany ny fahazoana trano sy fahazoana vatsim-pianarana fa tsy hoe satria mpianatry ny oniversité dia tsy maintsy mahazo trano sy vatsim-pianarana, na avy aiza io na avy aiza. Tsy zo zaraina maimaim-poana io ka hoe mila ho mahazo daholo na tsy maintsy mahazo daholo (fa hoe amin'ny anaran'ny fitovian-jo !!)
Na izany aza anefa dia malalaka kosa ny safidy hanohy hianatra eny. izay ilay zo mitovy ; fa saingy tsy maintsy manaiky ireo fepetra ireo aloha.
Raha ny fahafantaranay ny tokony ho izy anie dia miala ny trano daholo ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka rehefa mifarana ny taom-pianarana. Io fotoana io na hanaovana ny fikarakarana ny teorana ary fandaminana ny fizarana trano ny taom-pianarana ho avy indray ary hifantenana ireo izay afaka miverina amin'ny trano efa nitoerany raha mahafeno soa aman-tsara ny fepetra izy (ohatra hoe afaka manamarina fa nanaraka tsara ny taom-pianarana, nanala fanadinana na afaka na tsy afaka fa ny indray mandeha tsy afaka ihany no azo ekena).
Nahoana no tsy asiana resaka ampahabemaso intsony ny fepetra momba ny oniversite sy ny lalanam-pifehezana misy ao fa tonga dia mpianatra mihevi-tena ho manana ny rariny d'office no atao resaka ? Tsy misy mpianatra afaka milaza ho tsy mahalala ny fepetra efa mipetraka, na iza na iza. Mahalala an'io, izay vao mianatra eny.
Nampidirin'i potsy @ 12:28, 2008-02-04 [Valio]
Ny trano ange, sy ny bourse koa, efa misoratra mazava any amin'ny dosie fangatahana azy fa "faveur" io fa tsy "droit". Tsy misy manana zo velively hipetraka eny amin'ny cite U, ary tokony haverina hotsindriana mihitsy izay zavatra izay.
Efa EXTORSION izany fangalana takalon'aina izany, ka asa na ahoana no fipetraky ny lalàna malagasy manoloana an'izany heloka izany.
simp > izay ilay hoe "culture du gratuit" ko, izao no vokany ;-)
Nampidirin'i lap @ 13:54, 2008-02-04 [Valio]
tokony asiana camp militaire eny akaiky eny ny tena marina eee
mba mifampitana tsara @ zay :)
Nampidirin'i simp @ 16:09, 2008-02-04 [Valio]
Mety ho hevitra mety ihany izay,
Fa mety mampisy tantara hafa indray koa anefa ... :-)
Nampidirin'i lap @ 07:35, 2008-02-05 [Valio]